माओवादीको जनसरकार जस्तै कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउने, को– को बन्दैछन् मन्त्री ? – SamajKhabar.com
माओवादीको जनसरकार जस्तै कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाउने, को– को बन्दैछन् मन्त्री ?
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १३:०८
काठमाडौं । निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेर ५ वर्षका लागि प्रतिपक्ष बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न छायाँ सरकार गठन गर्ने भएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै सरकारका कामकाजलाई निगरानी गर्न छायाँ सरकार गठनको गृहकार्य भएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलको शनिबारको बैठकले सरकारलाई सन्तुलन गर्न माओवादीले द्वन्द्वकालमा बनाएको ‘जनसरकार’ शैलीकै ‘छायाँ सरकार’ बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन मन्त्रालय नै तोकेर पार्टी नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने गरी छायाँ सरकार बनाउने निर्णय भएको बताए ।
‘प्रतिपक्षी भूमिका प्रभवकारी बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रालय नै तोकेर जिम्मेवारी दिने र सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने निर्णय भएको छ ।’, थापाले पत्रकारहरुसंग भने । छायाँ सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारी कसलाई दिनेभन्नेबारे संसदीय दलको निर्वाचन पछि टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।
बैठकमा अधिकांश नेताहरु सर्वसहमतिले संसदीय दलको नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार १३:०८ मा प्रकाशित